NPK ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာကုန်ထုတ်လုပ်မှုထုတ်လုပ်သည့်လိုင်း - YiZheng Heavy Machinery Co. , Ltd.
ကျွန်ုပ်တို့သည် dryless extrusion granulation ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်ပြည့်စုံသောအတွေ့အကြုံရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းရှိလုပ်ငန်းစဉ်ချိတ်ဆက်မှုတိုင်းကိုအာရုံစိုက်ရုံသာမကထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတစ်ခုစီ၏လုပ်ငန်းစဉ်အသေးစိတ်များကိုလည်းအမြဲတမ်းနားလည်ပြီးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုအဆင်ပြေစွာဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးသည် Yizheng Heavy Industries နှင့်သင်၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏အဓိကအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာလိုင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်ပေးသည်။
ခြောက်သွေ့သော extrusion granulation ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ကောက်ပဲသီးနှံအမျိုးမျိုးမှမြင့်မားသော၊ အသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသောထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ခြောက်သွေ့ရန်မလိုအပ်ပါ။
extruding granulation ခြောက်သွေ့ခြင်းမရှိဘဲ roller ကိုမတူညီသောပုံစံနှင့်အရွယ်အစားအမှုန်များအဖြစ်ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
၂။ စက်မှုစွန့်ပစ်ပစ္စည်း - စပျစ်သီး၊ ရှာလကာရည်၊ ပီလောပီနံအကြွင်းအကျန်၊ သကြားအကြွင်းအကျန်၊ ဇီဝဓာတ်ငွေ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ သားမွေးအကြွင်းအကျန်
၅။ ရွှံ့နွံ - မြို့ပြရွှံ့နွံ၊ မြစ်ရေ၊ filter filter
ကျွန်ုပ်တို့သည်ခြောက်သွေ့စရာမလိုသောခြောက်သွေ့သော extrusion granulation ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းတွင်အဓိကအားဖြင့်ရောနှောခြင်း၊ disk feeder၊ roller extrusion granulation စက်၊ roller ဆန်ခါစက်၊ belt conveyor၊ automatic pack နှင့်အခြားအရန်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။
ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းပစ္စည်းကိရိယာများကိုကျွမ်းကျင်သောထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအားထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိရိယာများနှင့်တစ်နှစ်လျှင်တန် ၁၀၀၀၀ မှတစ်နှစ်လျှင်တန် ၂၀၀,၀၀၀ ကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်လိုအပ်ချက်များအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်။
1. စက်မှုဖိအား granulation ကုန်ကြမ်းအပူသို့မဟုတ်စိုထိုင်းဆမရှိဘဲအသုံးပြုသည်။
၂။ အပူခံထိခိုက်လွယ်သောကုန်ကြမ်းများအတွက်သင့်လျော်သည်။ ဥပမာ ammonium bikarbonate
4. စွန့်ပစ်ရေ၊ အငွေ့မှထွက်သောဓာတ်ငွေ့များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုမရှိပါ။
5. အမှုန်အရွယ်အစားဖြန့်ဖြူးယူနီဖောင်းဖြစ်ပြီး, ခွဲခြားခြင်းနှင့်စုစည်းထားခြင်းမရှိ။
၇။ လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်၊ အော်တိုထိန်းချုပ်မှုကိုလွယ်ကူစွာသိရှိနိုင်ပြီးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုလည်းတိုးတက်စေသည်။
အထူးစွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်မရှိဘဲကုန်ကြမ်း applications များကျယ်ပြန့်ရှိပါသည်။
ခြောက်သွေ့သော extrusion granulation ထုတ်လုပ်သည့်လိုင်းတွင်အလိုအလျောက်သုတ်ခြင်း၊ ခါးပတ်သယ်ဆောင်စက်၊ ၀ င်ရိုးနှစ်ဆရောနှောခြင်း၊ disc feeder၊ extrusion granulation စက်၊ roller screening machine၊
၁။ Dynamic Batching Machine
အလိုအလျောက်ပါဝင်သောစက်သည်ကုန်ကြမ်းများကိုဖော်မြူလာအချိုးအရကျွေးမွေးသည်။ ၎င်းသည်ဓာတ်မြေသြဇာအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ထိရောက်မှုအားဖြင့်သုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုအလိုအလျောက်ပြီးစေသည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများပြီးနောက်, ပစ္စည်းကို double-axis Blender သို့သယ်ယူပို့ဆောင်သည်။
၂ ။ နှစ်ဆ Shaft ဓာတ်မြေသြဇာရောနှော
disc ရောနှောစက်သည်ဗိုင်းလိပ်ကိုမောင်းနှင်ရန် cycloid needle wheel reducer ကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့နောက်လှုပ်ခတ်နေသောလက်မောင်းကိုလှည့်ရန်နှင့်နှိုးရန်။ ရောစပ်နေသောလက်မောင်းပေါ်ရှိဓါးသွားများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လှန်လှောကြည့်ခြင်းနှင့်အတူကုန်ကြမ်းများသည်အပြည့်အဝရောနှောနေသည်။ အဆိုပါရောနှောပစ္စည်းအောက်ခြေမှာထွက်ပေါက်ကနေထုတ်လွှတ်သည်။ ၎င်းဒြပ်စင်သည်ကပ်လျှက်မလွယ်ကူ၊ လွယ်ကူ။ လက်တွေ့ကျသော polypropylene ပန်းကန်သို့မဟုတ်သံမဏိနံရံများကိုအသုံးပြုသည်။
ရောနှောထားသောကုန်ကြမ်းများကို Belt conveyor မှ disc feeder သို့သယ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည်ပစ္စည်းအား hopper မှတစ်ဆင့် feeder အောက်ရှိ roller extruder လေးခုသို့အညီအမျှပို့သည်။ စက်သည်ပစ္စည်းကိုအပိုင်းအစများအဖြစ်သို့ကျဆင်းသွားသောဗို့အားအောက်ရှိလှည့်နေသောအခန်းထဲရှိကျိုးနေသောအခန်းထဲသို့ဖိအားပေးသည်။ ထို့နောက် ၀ င်ရိုး ၀ င် ၀ ံပုလှံနှစ်လှည့်အဖြစ်လိုအပ်သောအမှုန်များကိုခွဲထုတ်သည်။ ကြိတ်စက်သည်ချေးခြင်း၊ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်သက်ရောက်မှုအားခံနိုင်ရည်ရှိသောသတ္တုစပ်အသစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
၄ ။ Rotary စည်မြင်ကွင်း
Extrified granulation အမှုန်များကိုပတ် ၀ န်းကျင်ပေါ်ကနေတဆင့် roller filter သို့သယ်ဆောင်သွားသည်။ substandard အမှုန်များသည်မျက်နှာပြင်အပေါက်မှတစ်ဆင့်ကြီးမားသောအမှုန့်ထွက်ပေါက်မှစီးထွက်လာပြီး၊ ထို့နောက်အလယ်တန်း granulation အတွက် disc feeder သို့သယ်ဆောင်သွားသည်။ အနိမ့်အဆုံးထွက်ပေါက်နှင့်ချောareaရိယာမှသယ်ယူပို့ဆောင်။